Myanmar News Zone (မြန်မာသတင်းရပ်ဝန်း) - စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
သတင်းများ	ဗွီဒီယိုများ	အတွေးအရေး	ဆွေးနွေးခန်း	စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
ဘာမှသိပ်မစဉ်းစားဘဲ နားလည်မှုရှိတဲ့ ချစ်သူကို ရွေးသွားမယ် ခရစ္စတီးနား
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 02 July 2010	Q. ကိုယ်အခု သရုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ ကာရိုက်တာလေးတွေရော ရှိလား။A. သရုပ်ဆောင်ချင်တာတော့ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။ အခုဆို စိတ္တဇဆန်ဆန် ရူးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေး လုပ်ကြည့်ချင်နေတယ်။ မလုပ်ဖူးသေးတော့ လုပ်ကြည့်ချင်နေတယ်။ ဝတ္ထုတွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေလည်း ဖတ်ဖူး ကြည့်ဖူးတယ်။ ကဗျာဆန်တဲ့ ကာရိုက်တာ ဆိုလည်း အရမ်းနွဲ့နှောင်းပြီး ကဗျာဆန်တာ မျိုးကို လုပ်ကြည့်ချင်တယ်။
Read more...	အောင်မြင်ကျော်ကြား အနုပညာရှင်များရဲ့ လျှို့ဝှက်စကား သားစိုး
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 01 July 2010	သူငယ်ချင်းတွေက ပေးထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်နာမည် သူငယ်ချင်းတွေက ကြွက်စုတ်လို့ ခေါ်တယ်။
ကိုယ်ချစ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို ပေးထားတဲ့နာမည် ခွေးချစ်တော့ အရင်တုန်းက တိုက်ခန်းမှာ ဗုံဗုံမွေးထားတဲ့ ခွေးနာမည်က ဘိုဖြူတဲ့။
Read more...	စီးပွားရေးက စဉ်းစားထားတယ် အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ရင် ပြောမယ် ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
Written by Nwe Wai Lwin	Details
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 30 June 2010	ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေ ဆက်တိုက်ရိုက်ပြီး အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့ ဝတ်မှုန်က အခု စီးပွားရေးလုပ် တစ်ခုခုကိုပါ လုပ်ကိုင် တော့မယ်လို့ သတင်းစကားတွေ ကြားနေ ရတာကြောင့် ရိုက်ကွင်းမှာ ဆုံတုန်း မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါ.......Q. အခုဇာတ်ကားတွေရိုက်နေတော့ ဇာတ်ကားတွေကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ခံ ဖြစ်တာလား။
Read more...	အယုံလွယ်သူ ခင်ဘုဏ်း
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 29 June 2010	‘မင်းကြောင့်၊ မင်းကြောင့်’ သီချင်းလေး တွေနဲ့ ပရိသတ်က ခင်ဘုဏ်းလို့ သိထားတဲ့ အဆိုတော် ခင်ဘုဏ်းက အယုံလွယ်သူ သီချင်းလေးဟာ သူမရဲ့ ခံစားချက် တစ်စိတ် တစ်ဒေသကို ဖွင့်ဟ ပြောချင်တာပါလို့ ဆိုလာတဲ့အခါ.......
Read more...	သီချင်းက ပထမဆိုတဲ့ ရတနာမိုင်
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 27 June 2010	တစ်ချိန်က ဂီတလောကမှာ မလွမ်းပို သီချင်းနဲ့ နာမည်ရခဲ့တဲ့ အဆိုတော်မိုင်ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် ရတနာမိုင်ဟာ အတွဲ ခွေတွေ မှာ သီဆိုနေရင်း အခုတော့ တစ်ကိုယ်တော် ခွေ ထွက်ရှိတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အခွေ အကြောင်းနဲ့ သူမရဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု လေးတွေကို ပရိသတ် အတွက် မေးမြန်း ခဲ့ပါတယ်။
Read more...	အောင်မြင်ကျော်ကြား အနုပညာရှင်များရဲ့ လျှို့ဝှက်စကား - ဖွေးဖွေး ဒရာမာဇာတ်ရုပ်တွေနဲ့ ပရိသတ်ကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်
စိုးမြတ်နန္ဒာရဲ့ ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ စပ်မိစပ်ရာ
အောင်မြင်ကျော်ကြား အနုပညာရှင်များရဲ့ လျှို့ဝှက်စကား ခင်လေးနွယ်
အချစ်ဆိုတာကို နားလည်မှုရှိမှ ပတ်သက်ခဲ့တာလို့ ဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
Start Prev 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next End Page 74 of 79